I-Archos 5 yeThebhulethi ye-Intanethi sele inenkxaso ye-Open GL | I-Androidsis
El I-Archos 5 ithebhulethi ye-intanethi mhlawumbi wayenguvulindlela wento enemfashini namhlanje, i Ithebhulethi ye-Android. Ukuba ngowokuqala kwaye ngendlela efanayo naleyo yenzeka ngayo nge-Htc G1 kunye ne-Htc Magic inayo Inkqubo yokusebenza yi-Android 1.6 ke kwisixhobo solu hlobo, ukungabinakho ukuhambelana kweGL evulekileyo kukukhubazeka.
Ukulungisa oku ngaphakathi kwethebhulethi, u-Archos usandula ukukhupha Uhlaziyo lwezi ndawo ngayo ixhasa i-Open GL kwaye njengoko sibona kwividiyo, imidlalo ye-3D iyabaleka.
Eyona nto iindaba ezilungileyo zinokuba zimbi ukuba sicinga ukuba oku kwenziwa kuba ngekhe kufumane uhlaziyo I-Android 2.1 okanye i-Android 2.2 esele ibandakanya obu buchwephesha ngokwemveli.
Ndiyathemba ukuba esi sisiqwenga sokudlula kwaye bafumana olo hlaziyo lwenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » I-Archos 5 yeThebhulethi ye-Intanethi sele inenkxaso evulekileyo ye-GL
Ithebhulethi inomatshini omninzi we-2.1 okanye i-2.2. Ubuncinci bayayihlaziya, kuba yaphuma nge-1.5 phantse ngaxeshanye ukuba iPhupha lafumana i-1.5 kwaye ndicinga ukuba olu luhlaziyo lwesithathu ukusukela ngoko. Kunokuba lula ukubeka i-OpenGL kwi-1.6 kunokuyiphucula ngokupheleleyo ibe ngu-2.1 okanye ngo-2.2. Andikhethi ukuba esi sixhobo sinokuhlaziywa kwezi nguqulelo, kuba, kakade, sinamandla.
Kwaye, njengamazwana, sele sinqwenela ukuba i-HTC ibe nenkathalo efanayo neArchos enezixhobo zayo xa sele ifunyenwe.
Isiqinisekiso. Sebenzisa i-Open GL ES (ES yinguqulelo ecuthweyo yezixhobo eziphathwayo) iGameloft kunye nezinye iinkampani zemidlalo zihlala zisebenzisa i-Android NDK (yeNative Development Kit) ebavumela ukuba basebenzise ikhowudi yemveli ngaphakathi kwekhowudi yeJava.
I-NDK iyahambelana nayo nayiphi na i-Android evela kwi-1.6.
Omnye umba kukuba abaqhubi behardware bayayixhasa na i-Open GL ES, yiyo loo nto i-NDK inokuthi okanye ingasebenzisi ukukhawulezisa izixhobo endaweni yesoftware.
Unyanisile, yi-Open GL 2.0 esele iza ne-Android 2.2, kodwa okoko NDK ikhupha i-1 kunye neDonut inenkxaso ye-OpenGL ES 1.1.